Goobaha qaxootiga la dejiyo oo sir laga dhigayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xarun iskuul horey u ahaan jirtay balse la rabay in goob qaxootiga la dejiyo la dhigo oo xolcaysa. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT.
Goobaha qaxootiga la dejiyo oo sir laga dhigayo
La daabacay onsdag 28 oktober 2015 kl 11.16
Hey’adda Migrationsverket ayaa go’aansatay in liisyada ay ku qoran yahiin goobaha qaxootiga ahaadaan sir ahaato.
Labo goobood oo ku taala Danderyd waqooyiga Stockolm oo la qorsheynayey in qaxooti la dejin ayaa xalay weerar dab loo geystay.
Hey’adda Migrationsverket ayaa hadda waxay go’aansatay in liisyada ay ku qoran yahiin goobaha qaxootiga ahaadaan sir, sida uu weriyey wargeyska Dagens Nyheter.
Shalay ayey aheyd markii degmada Danderyd ku dhawaaq in goob ku meelgaar ah oo qaxootiga la dejinayo ka hirgelineyso dhisme horey u ahaan jiray iskuulk, iyadoo qorshaha goobtaan qaxootiga la soo dejiyo laga bilaabo bartamaha bisha november.
Laakiin habeynimadii xalay ayaa cid aan la garaneynin dab ku weerartay goobta qaxootiga loogu talo galay in la dejiyo. Guriga ayaa wajiga horey ka gubtay iyadoo lagu guuleystay in la baqtiiyo dabka inta uusan ku faafin dhismaha oo dhan.
Olle Reichberg oo ah xildhibaan golaha degmada ka trisan ahna xubin matasha xisbiga moderaterna idacaadda p1-morgon ee ka baxda raadiyaha Sweden u sheegay in weli hadefka yahay in xaruntan qaxootiga la soo dejiyo.
Dhanka kalena isla xalay waxaa dab la qabadsiiyey xarun kale ku taala Färingtofta gobolka Skåne oo iyadana la qorsheeynayey in la dejiyo qaxooti. cid aan la garaneynin ayaa goobta ku soo tuurtay dhagax weyn iyo dhalo wax ku gubta ku jiraan. Markii dab damiska goobta soo gaartayna waxaa laga helay ruug xarunta dhexyaalay oo gubanaya, sida uu tabiyey wargeyska Expressen.
Goobo kale oo qaxooti degan yahiin kuna kalo yaalaa degaanada kalo ah Kävlinge iyo Löderup ayagana waxaa lagu soo tuuray waxyaabo qarxa.
Xilliyadii ugu denbeeyey isku geyn 15 goobood oo qaxooti loo qorsheynayey in la dejiyo ayaa la gubay. Haddana hey’adda Migrationsverket ayaa qorsheynaysa in ay qariso ciiwaanada ay ku yaala goobo loo qorsheynayo in la dejiyo qaxootiga badan ee waddanka soo gaaraya.
Sida ay tabisay idaacadda Ekot 66 000 oo ah goobo ay xukumadda damacsan yahay in si ku meelgaar ah u dejiyso qaxootiga ayaa ciiwanada ay halka ay ku ooli doonaan laga dhigay sir. Imminkana hey’adda Socdaalka ayaa go’aan ku gaartay in ay qarisho ciiwaanada xeryaha qaxootiga, sidaa uu wariyey wargeyska Dagens Nyheter.
- Xaaladda ee goobaha qaxootiga waa ka sii xumaanqaysaa, welwel waxaan nagu abuuray gubista badan ee xaruumahan loo geysanayo. Sidaas daraadeed waxaan go’aansanay in aan sir ka dhigno goobaha qaxootiga la dejiyo, sidaas laanta p1-morgon u sheegay Willis Åberg oo ah sarkaal ka tirsan hey’adda Migrationsverket.
– Waan isku taxluujinaa in aan ahaano hey’adda macluumadkeeda dadka u furan yahay laakiin sidaan hadda aragno waxaa dhaanta in aan qarino ciiwanada ay ku yaalan goobaha qaxootiga si loo yareeyo khatarta, ayuu raaciyey.
Migrationsverket och Danderyds kommun om bränderna i P1-morgon
Dab xalay qabsaday goob lagu qaabilo caruurta qaxootiga ah
Cabdi Raxmaan "Laba beri ma cadeeyan"
Dhaawac loo geeystay xaruun qaxooti